Tag: shiikh | Sagal Radio Services
Xasan Sheekh oo weerarkii ugu ba’anaa ku qaaday afar Musharax, kuna tilmaamay Qeyrul Mas’uul (Daawo)
Sagal Radio Services • News Report • February 3, 2017
Madaxweyeyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa weerar ba’an ku qaaday Afar Musharax oo ka mid ah kuwa u taagan xilka Madaxweynaha Soomaaliya, isagoo ku tilmaamay inay yihiin kheyrul Mas’uul, fududeystay mas’uuliyadii ay umadda u qaadeen xilka ay hayeen.
XASAN SHEEKH OO QORSHEYNAYA IN DOORASHADA DIB LOOGU DHIGO SI UU UGA QEYB GALO SHIRKA MIDOWGA AFRIKA -AU
Madaxweynaha wakhtigiisu dhamaaday Md. Xasan Sheekh, ayaa codsaday in dib loogu dhigo wakhtiga doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo lagu wado in ay dhacdo dabayaaqada bishan Janaayo, si uu uga qeyb galo shir madaxeedka Urur-ka Midowga Afrika oo bishan Jan 22-31, 2017, Addis Ababa lagu qabanayo.
C/wali Sh. Axmed “Shaqo aan la qaban saddex sano ayaa la rabaa deg deg in hal maalin lagu qabto”
Sagal Radio Services • News Report • January 17, 2016
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya C/wali Sheekh Axmed ayaa walaac ka muujiyay shirarka wada tashi ee la isku mari la’yahay ee ka socda magaalada Kismaayo, isagoo xusay inuu lumay waqti badan oo wax lagu qaban karay.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu horkacayo ayaa ka degey garoonka diyaaradaha ee magaalada Addis Ababa, halkaas oo uu kaga qeybgeli doono shir madaxeedka Midowga Afrika.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sh. Shariif oo Urur Sama fal kaga dhawaaqay Bristol (Sawirro)
Sagal Radio Services • News Report • January 26, 2015
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa magaalada Bristol ee dalka Ingiriiska kaga dhawaaqay urur sama fal la magac baxay Samadoon Foundation,iyadoo ururkan cusub uu diiradda saari doono arrimaha dib u heshiisiinta, waxbarashada iyo caafimaadka.
Siyaasiga C/Laahi Sheekh Xasan oo Xabsiga laga sii daayay iyo Xog ku aadan Dambiyada ay Dowlada ku eedeesay
Xasan Sheekh oo ugu baaqay Xildhibaanada kasoo horjeeda in ay ilaaliyaan shuruucda dalka iyo dhaqanka Dowladnimada
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa shalay galab Madaxtooyada Qaranka ku qaabilay qaar ka mid ah Xildhibaannadii Baarlamaanka ee bayaanka soo saaray.
Xasan Shiikh Maxamuud oo eedeyn dhanka siyaasada ah ku sheegay hadalkii kooxda muniter gurob ee dhawaan loo jeediyay
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa dagaal siyaasadeed ku tilmaamay eedeynta Dowladda Soomaaliya loosoo jeediyay ee ku aadan in Dowladda ay hub siiso Al-Shabaab.
XASAN SHEEKH: “Haweenku waa hormuudka bulshada Soomaaliyeed”
Madaxweynaha Somalia, Xasan Sheekh Maxamud oo ka hadlayay munaasabadda maalinta haweenka caalamka oo ku beegan maanta oo Maarso ay tahay siddeed ayaa sheegay in haweenku ay yihiin horumuud bulshada Soomaaliyeed.
Daawo Sawirada:Qaabka loo soo dhaweeyey maanta Madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud
Sagal Radio Services • News Feature • February 16, 2014
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa saaka dalka dib ugu soo laabtay, iyadoo magaalada Muqdisho si weyn loogu soo dhaweeyay.
Sheekh Cali Dheere: ‘Al-Shabaab waxay leeyihiin tilmaamihii Khawaarijta
Sheekh Cali Sheekh Maxamuud (Sheekh Cali Dheere) oo ka mid ah culimada ugu caansan dalka ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ay leedahay astaamo badan oo ay lahaayeen Khawaarijtii dishay qaar ka mid ah asxaabtii Nabiga NNKH.
Madaxweynihii hore Sheekh Shariif oo ka hadlay Xaalada Soomaaliya iyo dagaal beeleedyadii ka dhacay Gobolada
Sagal Radio Services • News Report • January 3, 2014
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ku sugan magaalada Kampala ayaa ka hadlay Xaalada Soomaaliya, isagoo wax laga xumaado ku tilmaamay dagaal beeleedyadii ka dhacay Gobolada dalka.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo Diblomaasiyiin kula kulmay magaalada Nairobi (Sawirro)
Sagal Radio Services • News Report • December 28, 2013
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulamo gaar gaar ah shalay iyo xalay Nairobi kula qaatay Diblomaasiyiin caalami ah, isagoo kala hadlay xaalada Soomaaliya.